पाँच खानेपानी योजना सञ्चालन
विकट ग्रामीण भेगमा खानेपानी समस्या हल गर्न पाँच आयोजना सुुरु भएका छन् । सामाजिक स्रोत विकास केन्द्रले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरेको हो ।
तीन सयभन्दा बढी जनसेना बिरामी
नेकपा (माओवादी) जनमुक्ति सेनाका प्रथम डिभिजन मुख्यालयका तीन सयभन्दा बढी जनसेना बिरामी भएका छन् । प्रथम डिभिजन मुख्यालयको मुख्य शिविर इलामको चुलाचुलीका जनसेना उचित बासस्थान र दूषित खानेपानीका कारण जन्डिस, झाडापखाला, ज्वरो र टाइफाइडका बिरामी भएको डिभिजनका सहायक कमान्डर पावेलले बताउनुभयो ।
वाईसीएलद्वारा फोहोर उठाउन सुरु
काठमाडौँ, भदौ ८ गते । विगत दुई सातादेखि राजधानीमा थुप्रिएको फोहोर शनिबारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) निकट युवा सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)ले उठाउन सुरु गरेको छ ।
बर्दियामा खतरनाक औलो रोग
गुलरिया, भदौ ६ गते । बर्दिया जिल्लामा यतिबेला औलोका रोगीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसवर्ष ५६ जना औलोका रोगी फेलापरेका र तीमध्ये १० जनामा खतरानाक औलो रोग भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।
म माइती (काठमान्डू) गएका बेला भाइसँग प्रश्न गरेँ, 'तिमी वातावरण पढेको मान्छे, ल भन त अहिलेको फोहोर समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?' उसले केहीबेर सोच्यो र भन्यो- 'हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोर 'जैविक' कुहिने प्रकृतिकालाई कुहाएर कम्पोस्ट बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा घरायसी फोहोरको करिब ९० प्रतिशत तह लाग्छ भने कम्पोस्ट करेसाबारी, फूलका गमला आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नदी किनारमा ढल
ढलमय बनेका राजधानीका नदी तथा खोलाले समस्या भइरहेको छ । वाग्मती सफा, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त तुल्याउने विषय अनेक कोणबाट उठाइने गरिएको छ । सरकारले बजेट भाषणमा भनेको छ- 'ढल निकासको गन्तव्य नदी हुन सक्दैन' । त्यसो भए ढल निकासको गन्तव्य के त ?
Results 4753 - 4758 of 4770